Askarigii Shiishka badnaa ee wax ka dilay Osama Ben Laden oo dhawaan Muuqaal soo saaraya+ SAWIRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Askarigii Shiishka badnaa ee wax ka dilay Osama Ben Laden oo dhawaan Muuqaal soo saaraya+ SAWIRO
Hadal heeynta ugu badan warbaahinta Caalamka ayaa noqotay Askarigii Shiishka badnaa ee dilay hogaamiyihii ururka Al Qaacida Osama Ben Laden waa ninka lagu magacaabo Robert O´Neill oo dhawaan Muuqaal cusub soo saaraya .
Robert O´Neill oo mudo 16 sano ah ka tirsanaa ciidamada sida qaaska ah u tababaran ee Elite (Navy Seals) ee dalka Mareeykanka ayaa wuxuu ka qeeyb qaatay in ka badan 400 oo weerar laguna soo qabanayay ama lagu dilayay shaqsiyaad mudo dheer la ugaar sanayay oo dambiyo kala duwan galay.
Ninkaan oo gudaha dalka Mareeykanka looga yaqaanay (Far-Toogte) wuxuu ahaa shaqsi aad u shiish badan oo 52-jeer la siiyay Bilado, ka dib markii uu ku soo guuleeystay hoowlgaladii loo diray. Robert O´Neill ayaa ka mid ahaa ciidamadii Mareeykanka ee 2-dii bishii Novembar sanadkii 2011-dii magaalada Abbottabad ee dalka Pakistaan ku soo qaarajiyay hogaamiyihii ururka Al Qaacida Osama Ben Laden .
Robert O´Neill oo bartay sida looga hor tago Qaraxyada deg dega ah loona fuliyo weerarada qorsheeysan ee daqiiqadaha yar lagu kala baxo ayaa inta badan waxa uu dusha ku sooxiran jiray caleemaha Dhirta gaar ahaan kuwa cagaaran. Robert O´Neill ayaa iminka Tv-ga Fox waxa uu u balan qaaday in uu 11-ka bishaan Novembar uu soo bandhigi doono muuqaal ka tarjumaya qaabkii ay u dileen hogaamiyihii ururka Al Qaacida Osama Ben Laden .
One thought on “Askarigii Shiishka badnaa ee wax ka dilay Osama Ben Laden oo dhawaan Muuqaal soo saaraya+ SAWIRO”
06/11/2014 at 16:12
bootaalayaal maraykanaa layiraah waa beentiis wuxuu dilay majirto .tii alle ayaa u timid usama